:: My Little World ::: Distance Fares @ SG
Posted by Nay Nay Naing at 7/14/2010 04:23:00 PM
ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကို ပြောချင်နေတာ။ နားလှည့်ပါးရိုက်ပြီး လူတွေဆီက ပိုပြီးယူလိုက်တယ်ထင်တာပဲ။ တစ်ဆင့်ထဲစီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနီးပါး ပိုပေးရတယ်။ ပြောင်းစီးတဲ့လူတွေ တချို့သာ ငါးပြားလောက်သက်သာတာ။
ခရီးပိုတိုတာရွေးဖို့ ကားနှစ်ဆင့်ပြောင်းမယ်ဆို အချိန်တွေကုန် အလုပ်ရှုပ်လို့ ဘယ်သူမှလုပ်မှာမှ မဟုတ်တာ။
Public Transport Councilက လူတွေက ရထား နဲ့ ဘတ်စ်ကား နေ့တိုင်းစီးခိုင်းရမယ်။
Wednesday, July 14, 2010 5:33:00 PM
မြစ်တို့၏ မာယာ... အဲလေ... distance fares တို့၏ မာယာ ပေါ့လေ။
ဒီနည်းက စင်္ကာပူမှာ အသစ်ဗျ။
ဘဘလီ အရင်က ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ နည်းနဲ့ မတူတော့ဘူး။
လီကွမ်းယူက.... ဒီလို ပြောဖူးသတဲ့။
"If you want to break someone's window, tell him that you are going to burn down his house. So when you really break his window, he'll be so grateful that he'll thank you for it."
ဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... တကယ် မသက်သာလည်း ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။း-)
Wednesday, July 14, 2010 7:11:00 PM
အိမ်ကနေ MRT ကိုကားစီးရတယ်။
ပြီးတော့ MRT ၉မှတ်တိုင်စီးရတယ်။ မသက်သာတဲ့အပြင် တကြောင်းကို ၃ ပြားပိုပေးနေရတယ်။
အသွားခုနစ်ဆင့် အပြန် ခုနစ်ဆင့်..
Wednesday, July 14, 2010 11:58:00 PM
yes. i hav to pay3cents more to every trip as well. it is not cuz of distance fare. it is cuz there has no more discount. previously, there has 3% discount. they have stopped this discount. this is one of the reason why some of the fares are up.. for my frd from my home. she has to take two buses every morning when she goes to work. but since distance is quite short one, she doesn't need to pay any more when she takes another bus. it is just $0.00 for next bus ride. so total, she just needs to pay S$0.71 for whole trip (one way and taking two buses). if normal way, she will have to pay at least S$0.19 more for next bus ride. im not covering up for them, but this is what i read from publictransport.com.sg :D they said some fares are up cuz of no more 3% discount. so i bear in my mind about it, but they dun really announce officially or i don't know. soalot of ppl misunderstand about it, including myself in the very first place.
Expiry of 3% Fare Rebate & Launch of Distance Fares on3July 2010 ဆိုပြီး တရားဝင် announce လုပ်ပါတယ်။
SZA ရဲ့သူငယ်ချင်း ဘတ်စ် ၂ ဆင့်စီးတဲ့အခါမှာ ခရီးတိုတဲ့ ပထမ ဘတ်စ်မှာ 0.00 ပဲကျပြီး ခရီးဆုံးမှာ 0.71 ပဲကျတယ်ဆိုတာ transfer penalty မရှိတော့လို့ ပါ။ အခု System က Distance နဲ့ တွက်တာဆိုတော့ ဘတ်စ် နှစ်ဆင့်ပြောင်းလဲ ခရီးတစ်ခုလို့ ပဲ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် သု့ အတွက် သတ်သာသွားတာ။
Distance Fairs System မှာ ခရီးစဉ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်တဲ့ စီးမျဉ်းတွေက..
a) Transfer time limit of 45 minutes
b) All journeys must be within2hours of the first boarding on the same journey
c) Single entry and exit allowed for rail
d) Current bus service must not be of the same number as the preceding bus service
e) Maximum of5transfers (from the current 3) can be made withinajourney
ကိုပေါပြောတဲ့ လီကွမ်းယူ စကားကို အသေအချာ မှတ်ထားရမယ်..
System အသစ်ကြောင့် ခရီးစာရိတ် ဘယ်လောက်ကွာခြားသွားတယ် ရေးထားပေးခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူတင်ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ Comment ရေးသွားတဲ့သူတွေထဲ အလုပ်အသွားအပြန် ခရီးစာရိတ်လျှော့သွားတာ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ သေးပါလား..
Thursday, July 15, 2010 10:32:00 AM
chan myay thar yar said...
အရင်စနစ်အဟောင်းတုန်းက ပထမဆင့် 1.31$ ပေးရပြီး ဒုတိယအဆင့်ကျတော့ 0.69$ကျပေမယ့် ပြောင်းစီခ 0.50$ rebate ၇တော့ 0.69-0.50$=0.19$ နှစ်ဆင့်ပေါင်း 1.31$ + 0.19$ = 1.50 $ ကျပါတယ်
ဒါပေမယ့်စနစ်သစ်မှာ ပထမဆင့် 1.45$ နဲ့ ဒုတိယဆင့် 0.04$ နှစ်ဆင့်ပေါင်း 1.49$ ကျလို့ ၁ဆင့်ကြီးများတောင်သက်သာပါတယ်..
ဒါပေမယ့် တဆင့်သမားဆိုရင်ကျနော့်ခရီးစဉ်အတိုင်းဆို ၁၄ ဆင့်ပိုကုန်မှာပါ...
နိဂုံးချုပ်အကြံပေးချင်တာက စနစ်သစ်အ၇ MRT နဲ့ ၁မှတ်တိုင် ၂။ ၃ မှတ်တိုင်ဝေးသူတွေလမ်းမလျောက်ပါနဲ့ ကားရှိရင်ကားစီးပါ လေးငါးဆင့်လောက်နဲ့ လူပိုသက်သာသွားပါမယ် စမ်းကြည့်ပါလေ....
ပုံ.... လီကွမ်းယာ... :)
Thursday, July 15, 2010 11:14:00 AM
အဲဒီကိစ္စက နားလှည့်ပါးရိုက် ဈေးတက်ရင် တက်တယ်မပြောပဲ ပြည်သူတွေကို လူလည်ကျထားတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
အဲဒီအတွက် သူတို့မှာ တစ်လကို ဒေါ်လာ သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ချီပြီး ပိုအမြတ်ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ဆီက တစ်နေ့ ၅ပြားပဲထား။ လူပေါင်းတစ်နေ့ ဘယ်လောက်ခရီးသွားနေလဲ။တစ်လကို ဘယ်လောက်မြတ်မလဲ။ တွက်ကြည့်ရင်ရပါတယ်။
Thursday, July 15, 2010 12:47:00 PM
I want smrt profit to increase then I will also got profit :)
အိမ် နဲ့ ရုံးကတော့ ဘာမှ မစီးရဘူး။
Thursday, July 15, 2010 9:07:00 PM
အလုပ်သွားရတာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အရင်သွားနေကြ လမ်းကြောင်းတွေအတွက်တော့ ပိုကုန်တာကြီးပါပဲ ။ ခုထိ သက်သာသွားတာ မတွေ့မိသေးပါဘူး ။
Saturday, July 17, 2010 12:58:00 PM